ट्रेडमार्क दर्ता - उद्यमी नेपाल Udhyami Nepal
के हो ट्रेडमार्क र कसरी दर्ता गर्ने ?
ट्रेडमार्क भनेको के हो?
उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा वस्तु तथा सामानहरू धेरै किसिमका उत्पादन गर्न सक्छ। एउटै व्यवसायमा पनि धेरै ब्रान्डहरु हुन सक्छन्। त्यसैले उद्यमीले आफूले उत्पादन गरेको सामानलाई छुट्टै परिचय दिनको लागि ट्रेडमार्क बनाउने गर्छन्। व्यवसाय वा ब्रान्डलाई चिनाउने नाम, पुरा पढ्नुहोस् “के हो ट्रेडमार्क र कसरी दर्ता गर्ने ?”
कुनै फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित माल सामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको माल सामान वा सेवाभन्दा फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्दचिन्ह वा चित्र वा शब्दचिन्ह र चित्र तिनवटैको संयोगलाई ट्रेडमार्क भनिन्छ।
हरेक व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको पहिचान बढाउन पुरा पढ्नुहोस् “ट्रेडमार्क दर्ता”